वाइड बडीको चर्काचर्कीः मिनेन्द्र रिजाल भर्सेज रविन्द्र अधिकारी (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
वाइड बडीको चर्काचर्कीः मिनेन्द्र रिजाल भर्सेज रविन्द्र अधिकारी (भिडियो)
डिसी नेपाल , १९ मङ्सिर २०७५
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठक हुन अरु केही साता लाग्ने भएपछि सांसदका गुनासा र आक्रोश संसदीय समितिका बैठकमा पोखिने गरेको छ। मंसिरमै बस्ने भनिएको संसद सरेर पुषमा सुरुहुने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु सरकारका पछिल्ला विभिन्न विवादास्पद विषयमा आगो ओकल्न तयार भएर बसेका छन्। यही बेलामा प्रतिपक्षी दलका संसदको भुंग्रोमा परेका छन् नागरिक उड्यन तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी। बुधबार बसेको संसदको लेखा समिति बैठकमा छलफलको विषय बन्यो-वाइड बडी खरिद प्रकरण, जहाँ सांसदहरूको एकोहोरो निसानामा परे मन्त्री अधिकारी।
नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइड बडी विमान घोटाला आरोप चर्किएपछि संसदको लेखा समितिले छानविन अगाडि बढाएको छ। समितिले बुधबार नागरिक उड्यन तथा पर्यटन, संस्कृति मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई समितिको बैठकमा बोलाएको थियो। यही मौकाको भरपुर फाइदा उठाए कंग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालसहित सरकार इतरका दलका सांसदले।
समितिमा मन्त्री अधिकारीले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा छानविन गरिरहेको जानकारी बताए। तर उनका उधारा आश्वासन सुन्ने पक्षमा सांसदहरु थिएनन्। उनले विमानको स्वामित्वका विषयमा भएका हल्ला निराधार रहेको भन्न मात्रै भ्याएका थिए संसदहरू उनीमाथि खनिए।
हेर्नुस् यो भिडियोः